Ndi ire ahia Trek bu ezigbo ahia? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Uzo ahia nke Trek - nzaghachi nye nsogbu a
Uzo ahia nke Trek - nzaghachi nye nsogbu a
Ndi ire ahia Trek bu ezigbo ahia?
Ntuziaka ngwa ngwa iji jide n'aka na ị na-azụtaMee njem
Ebe nrụọrụ weebụ ndị a dị naanị iji duhie ndị mmadụ ma were ego ha.Mee njemna ngwaahịa Bontrager na-ere naanịMee njemna ndị na-ere ya ikike.
Gaa n'èzí. You na-ahụ ụmụaka a? Ha nwere oge kachasị mma nke ndụ ha na igwe kwụ otu ebe. Ha ma ihe na-aga.
Zụta igwe kwụ otu ebe, buru njem dị iche. Mee ahụike na ịrịgo na ntụkwasị obi na ọdịda. Gbaa ịnyịnya ihe i nwere ike na adịghị emesi ihe ị na-enweghị ike.
Ọ na-akawanye mfe. Obi ga-adị gị mma Ruo mgbe ị ghọtara na ọ dịghị onye ọzọ na-akwọ ụgbọala na uwe elu na uwe ojii khaki. Oge iji ejiji.
Ya mere kitted. (bass heavy hip hop music) Malite iji okwu nrịanrịa dịka shred na gnar. Nọgidenụ na-akwọ ụgbọala, ka onwe gị gafere gị ugwu na ugwu.
Ọchịchọ nke ka mma ga-eto n’ime gị. Ichegbu onwe gị banyere igwe kwụ otu ebe. Dozie na ụdịdị, akụkụ isi, na ihe dị egwu dị ka ike ọgwụgwụ ike.
Mgbe ahụ ghọta na ịchọrọ ọrụ nke abụọ iji kwado ihe riri gị ahụ. (wepu akpịrị ya) Echere m, agụụ? Zụta igwe kwụ otu ebe maka oge nke atọ. Nke a nwere ọtụtụ atụmatụ, ọtụtụ dampers na oche oche na-arịgo na ala. - Mara mma. - Ọ bụghịzi naanị ịkwọ ụgbọala mgbọrọgwụ, izipu tụlee na ịmụ aghụghọ.
Otu ụbọchị ị gwara ndị ọrụ ibe gị gbasara ịnya ụgbọ ịnyịnya ị garala na otu ị si agba mbọ. Ha anaghị ege ntị. Otu bụ.
Aha ya bụ Jess ọ na-agba ịnyịnya kwa. Ọ na-ajụ, sị, 'to chọrọ ịgba ọsọ otu ụbọchị? 'Ma ị na-asị,' Sanụ ee! 'Amụma Jess dị mma. Dị ka, rea lly mma.
Ọ na-akuziri gị ụzọ na elu ala. Nweghị ike ịgbadata, ihe ọ na-agba. Make na-eme ya mana ike gwụrụ gị.
Ma ị chọghị ịma ruo mgbe e mesịrị n’ụbọchị ahụ. (Whine) (bass heavy hip hop music) Malite ịkwọ ụgbọala kwa ụbọchị mgbe ọrụ gachara. Chọta otu dị iche iche ma soro ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-enyere gị aka ịmezi egwuregwu gị.
Bụrụ onye ọkwọ ụgbọala ka mma site na ịme naanị ịgbalịsi ike. (bass heavy, hip music) rịba ama igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ dị ka igwe kwụ otu ebe a na igwe kwụ otu ebe. Cycgba ígwè n'okporo ụzọ pụrụ ịbụ ihe ọchị.
Nọdụ ala na a unyi jumper na-ahụ a ole na ole jumps na-eme gị aghụghọ. Ihe a siri ike karịa ka ị siri chee. Ọ dị elu n'ezie, nke ahụ jọgburu onwe ya.
Zụta akụrụngwa, zụta akụkụ, zụta ọtụtụ ngwaọrụ iji wụnye akụkụ ahụ. Wepụta oge iji kpebie igwe kwụ otu ebe ọzọ. Chọpụta nrọ gị na carbon.
uru nke ịkwụsị ite nri ụtụtụ
Ihe riri gị ahụ ga-aka njọ. Ga-eji obere oge rụọ ọrụ na oge ị ga-elele igwe kwụ otu ebe. Gbaa ịnyịnya ọzọ, gbutuo ahịhịa.
More ụzọ ụkwụ, ọzọ Lawn. Ilszọ ụkwụ, Lawn. Buyzụta nrọ gị.
Weta ụfọdụ ndị enyi ma gbagoro n'ihu na karịa karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Hapụ igwe kwụ otu ebe gị, gaa ebe ndị amamamịghe dị. Gaa na ụbọchị ọzọ.
Oge a ị bụ n'ezie ị ga - anọgidesi ike. Enweghị mgbaghara, enweghị mgbaghara. Nke a ka mma.
mmega ume ikpere maka ịgba ígwè
Oge a ọ ga - eti gị naanị na nkeji ise, ị ga - enwe obi abụọ, elu ise, o nweghị ike ikwenye ole ị nwetara. Ndewo enyi, otu ụbọchị ị ga-ahụ ọkwa mgbasa ozi na igwe ọhụrụ. Ọ dị ka nke gị, mana 15% na-acha ọkụ, 35% siri ike, na uhie.
Ọ bụghị maka igwe kwụ otu ebe ị na - agba, ọ bụ maka ịnyịnya nke igwe kwụ otu ebe gị na - ebu gị. (Ikuku hisses) Ọfọn, ma eleghị anya ọ bụghị nke a. ('Enwere M Ihe Ọiceụiceụ ahụ' site Nrọ Junkies) ♪ Nne hụrụ n'anya, ị ga-ahụ nke a n'anya ♪♪ Onye gụsịrị akwụkwọ na nnupụisi gaa mgbanwe revolution Na mpaghara m ha hụrụ nke a n'anya ♪♪ Aga m agbaji ya ♪♪ Dị ka m engine crank elu ♪♪ Ascension ♪♪ Akụkụ ọ bụla na-ege m ntị ♪♪ Lee mkpụrụ obi m anya ♪♪ Lee obi m anya ♪♪ Lee olile anya m ♪♪ Nwee ụwa n'azụ m ♪♪ Mana m na-eburu ya na agbanyeghị ♪ Gwa ha na Chineke nwere aka m ♪♪ Agaghị m ahapụ ya ♪♪ III si n'akụkụ oke osimiri bịa im Na-egwu mmiri kachasị mma enweghị m ike ịgọnahụ na ahọpụtara m Ee, ọ bụ Miggity Mack Milking the igwe okwu ♪♪ Echeghị m maka ya inyeghachi m ya
Gini mere eji ere ugboala Trek?
Naigwe kwụ otu ebeụkọ
N'ebe emechiri emechi, ndị mmadụ na-ezere njem ọha na eze, akagbu egwuregwu ndị ntorobịa, na ọtụtụ ndị chọrọ ịnatapụọnke ụlọ,anyịnya igweahụwo nnukwu mmụba na ewu ewu.Mee njemihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ikike nrụpụta ya n'ime ọnwa itoolu gara aga.Mar 26 2021
Gịnị mere ọnụahịa ndị njem Trek jiri bilie?
Na a nutshell, nabilien'imeọnụahịagafee ọtụtụ ndị nrụpụta, a na-akpọ 'Tụkwasịnụ & Chọrọ'. Ọtụtụ ihe na-abata na ya, mana isi ihe abụọ bụ isi bụ ọchịchọ karịrị akarị ikike, yana onye zụrụ ahịa ga-akwụ ụgwọ maka yaegonke teknụzụ ọhụrụ.Jenụwarị 14. 2021 g.
nabata na ihe ngosi gcn na mealex na olliewelcome ị kwuru na-ekele m na m na-atụ anya na nke a alexwait echere onye na-abịa mgbe e mesịrị maka izu ohi n'izu a anyị nwere teknụzụ dị ọkụ, gụnyere ọdụdụ kachasị mfe n'ụwa, ị kwalite igwe kwụ otu ebe Sefine na isiokwu kachasị mkpa anyị nwere maka mkparịta ụka ihe kpatara ụfọdụ igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ, ọ dị mma, ha ga-alaghachi na mkpuchi ma emesịa nke ahụ bụ oge mbụ kemgbe m mere ihe ngosi teknụzụ na emebeghị m ihe ngosi nka maka Ogologo oge, ya mere enwere m obi ụtọ ịmalite nke ọma anyị malitere na nyocha izu gara aga ka anyị mee ya, ka anyị nweta nsonaazụ ya n'izu gara aga, anyị jụrụ ihe ndị mmadụ chere banyere spicoaero breakaway bars na ihe ntorobịa Alex na-ejide. Ọfọn ọ bụghị banyere m, ọ bụ banyere ndị na-ekiri m na-eme ihe n'eziokwu, m na-atụ anya nsonaazụ a, ee, ọ naghị eju m anya ịkwụwa aka ọtọ ma ekwenyere m na achọghị m ịhụ ọtụtụ mmadụ na ha, n'ihi na m na-eche na ọ ga-abụ ihe dị ize ndụ na nkuku, ọ bụghị oké ma na isi ụka, ihe mere ụfọdụ anyịnya igwe dị oké ọnụ, ugbu a, m maara na nke a bụ a n'ezie sara mbara ajụjụ ma e nwere ọtụtụ nke dị iche iche ebe anyị na-atụle, t daalexyeah nke ahụ ziri ezi ma kemgbe ọtụtụ afọ anyị hụrụla na ịnyịnya ígwè abụrụla nnukwu ọgbara ọhụrụ ma sorokwa ha ahịa? Anyị ga-amalite site na ụlọ ọrụ nyocha na ụlọ ọrụ mmepe na ndị nrụpụta na-etinye oge na mgbalị dị ukwuu n'ime nyocha iji mee mgbatị elu elu na-eme igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụghị naanị ihu ọma na ha gosipụtara ma ha bụ naanị ndị kachasị elu, ndị kachasị ọsọ na Ọ na-ewe ezigbo oge, ọ nwere ike iwe ọtụtụ afọ, ọ ga-ewe ogologo oge maka ndị nrụpụta iji kpuchie ụgwọ ndị a.
Ee, na otu ihe ị ga-ahụ bụ na teknụzụ niile a nwere ike ịba n'ime ebe dị ọnụ ala, mana ọ gaghị ewe gị oge, mana atụla gị ụjọ maka ụdị igwe ndị a dị oke ọnụ n'ihi na dịka anyị kwuru, nke a teknụzụ ga - emecha rịa ala, ọ ga - abara onye ọ bụla uru, ọ ga - abara onye ọ bụla uru na afọ ole na ole anyị merela ụfọdụ isiokwu dị iche iche na - atụnyere otu ndị otu njedebe dị elu karịa ndị dị ọnụ ala karịa ndị otu ọhụụ ma ịmara ihe otu ọhụụ dị ọnụ ala karịa na - ewepụta oge ọ bụla ịnọ na mbu ka teknụzụ ga-enyere onye ọ bụla aka. Anyị na-aga n'ihu n'isiokwu na-esote, ee, ọnụ ahịa ihe ugbu a, ọtụtụ ndị na-eri ihe ga-eche na ihe a bụ ọnụ ahịa ya, ọ bụ ezie na ihe ndị a dị elu dị oke ọnụ, ha anaghị ekpuchi ọtụtụ ego, ka ha na-eme? Mba, na oru bụ otu n'ime nnukwu ụgwọ iji tụlee dị ka ịnyịnya ígwè dị elu, njedebe dị mgbagwoju anya nke chọrọ ọtụtụ ọrụ mmadụ iji mee ya na enweghị ike iji aka ya rụọ ọrụ na akpaghị aka, yabụ ọ bụ naanị usoro dị oke ọnụ nweta ndị a niile ka ha mee ka ọgba tum tum ahụ dị mgbagwoju anya ka ọ na-ewekwu oge ọ bụ na m chere na isi ihe ọzọ nke isiokwu a bụ ahịa efu, ọ bụ maka na enwere ahịa maka ya? Ọ bụrụ na ndị mmadụ azaghị igwe ndị a dị oke ọnụ, mgbe ahụ ahịa agaghị adị ka ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ga-egbutu ego ndị ahụ iji nweta ahịa, mana anyị dịka ndị na-azụ ihe na-azụ igwe kwụ otu ebe nke ọma na anyị na-ere ha na ha na-aga ire. akara na ụlọ ahịa na-ere ya n'ihi na ịnọ ebe ahụ ma jiri ọrụ ha ka ha wee nweta uru na ya, ma ọ bụghị ya, ụlọ ahịa ahụ agaghị adị na ị nweghị ike ịzụta igwe kwụ otu ebe gị na ọ bụ ya kpatara kpatara ụfọdụ ụdị nwere ike ịbelata ụlọ ahịa na-ere igwe kwụ otu ebe n'ihi na ha enweghị onye etiti ahụ nke na-akpata obere obere ego ahụ. Kpọmkwem nke ahụ bụ ihe ziri ezi ma anyị hụrụ n'anya idobe ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe nso, anyị anaghị eche maka ịkọ aha ugwu, nke ahụ bara uru ugbu a maka ndị nrụpụta ọ bụla, ọ bụ akara ahụ, ọdịdị ya na mmetụta ya, ọ bụ aha ahụ igwe kwụ otu ebe nke nwekwara ike iguzogide nnukwu ibu, ọ bụghị na mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe ị zụrụ aha igwe ahụ? yabụ ahịa bụ mpaghara dị oke ọnụ, ụdị na-etinye ego na ahịa ha ma na-echekwa ụdị ha dị ka ndị ugwu na ndị na-achọsi ike, ee echere m na ọ bụ oge anyị ga-elele nọmba ụfọdụ, ee anyị na-eme, m mere ụfọdụ ngwangwa ngwa ngwa maka nke a, ya mere aga m achọ laptọọpụ m ebe a. Enwere m Alex Soso.Enwere m ụfọdụ nọmba dị mkpa ebe a maka ụgwọ igwe kwụ otu puku na iri, yabụ ọ bụ igwe kwụ otu ebe na ị maara ihe m mebiri mgbe ị ihe na-eri nke mmezi nke mmezi ihe karịrị afọ anọ oge m na-achọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25 pence a mile nke karịrị ihe m chere na ọ dị ọtụtụ.
Echere m, enwere m mmesapụ aka na ụfọdụ ọnụọgụ, mana ọ na-enye gị obere akara baseball, yabụ ọ bụrụ na ị mere ụgbọala 100 kilomita, ee ole ọ ga-abụ? Nke ahụ na-efu m, ọ nwere ike bụrụ na ọ ga-efu gị £ 25 mana mgbe ahụ anyị lere anya na ọfụma Alex yeah, ị maara £ 25, ọ dị ọnụ ala karịa njem ụgbọ ala, ọbụlagodi ị na-elezi tagzi nke dị ọnụ ala karịa tagzi? na ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ụtọ, ọ bụ ihe omume ntụrụndụ gị yabụ m chere na uru abụghị azụmaahịa azụmaahịa ọ bụ azụmaahịa azụmaahịa mana ọ na-atọ ụtọ ihe niile scout scout gear na nke a bụ usoro mmekọrịta n'etiti Ọrụ Cores na ụdị ndị ọzọ na ha na-launching a ohuru gravel akpụkpọ ụkwụ nke mara mma jụụ na ya nwere a pụrụ iche na agba na ihe ndị na-mere na-egosipụta reflective pigments Safety mbụ m hụrụ n'anya ndị a, ha na-ele anya dị nnọọ ịtụnanya, Ọ bụghị! Kinddị ụdị ha dịka ị rutere n'ụrọ apịtị wee hapụ akụkụ ahụ nke apịtị na-acha akwụkwọ ndụ na ala akpụkpọ ụkwụ gị, gịnị kpatara na ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụghị na akpụkpọ ụkwụ ka ha dị jụụ mana ee kụrụ mkpọ nke aka ahụ mere ma dị mfe iji nweta nsị gị niile ka ị nwee nri nri gị. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta nri gị mgbe ị na-anya ụgbọala, ị nwere ike ime nke ahụ na azụ gị hip ma ha kwukwara na ha nwere ahụ iru ala karịa akpa azụ ị maara ihe kpatara alex ji dị mma dịka m ghọtara na ọ bụ na mgbe ị nwere akpa on Jiri igwe kwụ otu ebe, ọ dị oke-arọ, yabụ ọ ga-abụ ihe na-ata ahụ erughị ala na-aga n'ihu, yabụ akpa hip na-adị mma karịa mgbe ị na-agba ụgbọ ala na-enweghị atụ, mana ọ bụrụ na ị gafee azụ nke azụ gị hip, nwetara nwoke atg akwa, nke a bụ uwe ejiji ha na-eweta na 2021 Obi dị m ezigbo ụtọ ịhụ ya mana mgbe ọzọ ị na-aga ọrụ ma na-eje ije ị maara ihe m kwesịrị iweta kọfị m na meno oh dịkwa mma Ọ bụrụ na ị ' echetụla n'echiche na anyị nwere njide igwe kwụ otu ebe na nke na-aga yana aka ọ bụla ị nwere ike were kọfị gị, mana ịnya iko ịnyịnya ígwè ị ga-achọ Enwe mkpuchi mkpuchi n'ihi na ọ dị obere vidiyo na njikwa ahụ nke ọma, ọ nwere obere gripper n'ime ka iko gị ghara ịpụ, mana gịnị ka ọ bụ? Ọ bụrụ n ’ị gafefe n’elu olulu ma ọ bụ n’ọsọ ọsọ ma ọ bụ na mberede gbajie ị ga-akpachara anya, enwere m ike ịnwale nke m ga-anwale ebe enwere ihe ịma aka gcn, kọfị ole ka ị nwere ike idobe na ya? iko gị n'ụzọ na-arụ ọrụ ma bụrụ nke kachasị ọsọ nwere ike bụrụ na a ga-enweta ntaramahụhụ maka oke kọfị ollie enweghị ohere ọ gaghị enwe ịgba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu na enwere ike ịda ya ọzọ bụ onye na-ere ya italia c59saddle , bụ́ onye na-azọrọ na ya bụ oche kasị mfe n’ụwa. Ọ na-anọdụ n'ụzọ dị ịtụnanya na gram 61, ọ dị ezigbo mma, mana ị maara ihe ibu nke gram 61 dị? AlexNo, bia, emechara m nyocha na nke a ma ọ bụ agụba nwere ike itu gram 61, mana nke ka mkpa bụ na akwa zuru oke dị gram 60 nke ị gaghị achọ ịnọdụ ala na akwa, ị nwere ike ọ bụghị ọ bụ ntakịrị ihe na-emebi emebi ọ bụghị sadulu kama ọ bụ ezigbo echiche ma ị maara ihe kpatara ọ na-ada ka ọ dị mfe ọfụma ọ bụ n'ihi na ọ bụ nke carbon fiber carbon fiber Rail carbon fiber r base na padding ọma ọ dịghị ihe ọhụrụ, ọ dịghị na-agba ụra ma ọlị ma ọ bụ ya mere ọ dị mfe ikwu, Achọrọ m ihe ndozi ya na padding matewell, ọ masịrị m nke ukwuu ma nyekwa m iwu otu, yabụ enwere m mmasị na ya lee ka ọ si dị oh ụwa, ma eleghị anya mgbe ị na-arịgo ollie ị ga-ada n'ezie ọ dịghị ị na-eme nke ahụ ị na - eme mgbe niile nke ahụ bụ ihe na - esote nke teknụzụ na - ekpo ọkụ ihe bụ ihe mkpuchi inflatable sad oh oh na ọ dị mma dị mma ik nwere ike inwe ezigbo ik nwere ike inwe otu na gịnị kpatara ya? ndepụta anyị were ha n'ihi na ọ dị ntakịrị ntakịrị, ọ bụghị otu o si arụ ọrụ mgbe ahụ Alex, ọ dị mma na ị jụrụ nke ahụ n'ihi na enwetara m ọnụego site na weebụsaịtị ha ma ekwuru na ọ na-eji 3D airbag design na airbag esịtidem ikuku ekesa hip mgbali ndị ọzọ dị irè ujo echekwa hip na aftershock magburu onwe permeabilityit bụ ihe kasị mma na onye òtù ọlụlụ nke onye na-akwọ ihe ị na-eche yeah dị nnọọ ntakịrị ma ole ka ọ na-zụlitere na kickstarteruh m ga-ekwu 500 pound gị kilomita pụọ dị ezigbo 40,000 pound 40,000 pound Ya mere enwere m mmetụta na ha na-abịa Shopknee n'oge na-adịghị anya Green Edged Check Out Nke a na 2021 Green Eggs ga-eji akara igwe ọhụrụ ha Bianchi na ha ga-abụ ọnụ ọgụgụ Jiri igwe kwụ otu ebe ọhụrụ nke dị, ha ga-eji igwe kwụ otu ebe atọ nke ha ga-ebido, mgbe ahụ ultra na ọkachamara also nwekwara aquila ka ị nwere wiil atọ dị iche iche iji mee ị maghị ee ọpụrụiche bụ ụdị ọkụ gc gị ha frame of approx na gị Aquila ee ma ọ bụ Tequila ee, ugbu a, m na-edebe ya ọcha, ee nke ahụ bụ njem gị site na oge, site n'ụzọ bụ oge ha na anyị igwe kwụ otu ebe, ya mere anyị nwere ike ịhụ ihe, uh, a ole na ole bi g oge ọnwụnwa on anyịnya igwe anyị nwere ike ee ihe banyere agba oh ee echefula na agba ha chọrọ iji baajị, adịghị ha n'ihi na ha chere na ihe kwesịrị ịbụ chawapụrụ, ma echegbula, ị na-anọ na omenala Bianchicolor ? n'ihi ya, gịnị bụ isceleste uh maka ndị bianchifans niile n'ebe ahụ enweghị àkwá na-enweghị nchekasị ga-agba ịnyịnya na-agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba ọja) gbụ dị iche iche. ya mere ee ee anyị kwesịrị ịchụpụ gị enyi ị mechara aha m abụghị ka anyị gaa hey mara mma bịakwute anyị enyi ihe ọzọ dị mma anyị nọ na nri izu ma anyị chere na nwanyị a mara mma zitere gị ụfọdụ nri. ya mere o ziri ezi na oh i nwere achicha gi oh ee catherine ji obi uto gcn na onye nwere obi uto na onye na-eme achicha emeela ka anyi kwe ka anyi lee anya achicha ekeresimesi nke anyi na gcn rondel n’elu, kedu ka ihe a na-ekweghi ekwe si di n’ile anya ee lee gị anya na nke ahụ bụkwa na ọ dịghị mma na ite ole na ole ee, enwere m ụfọdụ na peeji ahụ ee ndị a bụ nke m enwere ebe a na bisikiret a amaret ị ga-aga ndị a bụ obere achịcha ndị bụ obere osisi Krismas shorti dị ka chocolate truffle l ike ọma truffle ee ha niile bụ ndị igwe anaghị ata nchara na ibe a ee, ọ dị mma, daalụ, ana m eche nke ọma na m ga-emepe achicha a. Echere m na ị chọrọ biyayeah gaa ebe ahụ bụ onye nọ n'ihu m amaghị onye ọhụụ oh ee ọ na-egbusi ị chọrọ obere ee eeh mma m ga-emecha mepee m kwesiri iwere teepu site na onu oh ee o di mma igbutu achicha oge mbu buru ibu dika iberibe i choro m na-elo ihe a ma lelee ibu m oh yeahyeah ị maara ihe enyi m ga-agwa gị na m adịlarị oh mma m na-atụ anya ya izu niile ebe anyị maara na ha zigara ya ihe ọjọọ oh ugbu a, ọ gafeela echegbula n'ihi na ị na-enwe nri nke Izu uka nke oma ghoro gi aka nke kachasi nma nke egwu m oh o abughi ihe ozo bu ezigbo slacks nke a ka anyi gha eme ugbua site na otutu ihe a bu ugbua ka anyi gha acho ugbua. akụrụngwa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ndụ igwe kwụ otu ebe nke bụ okwu ollie adịghị mma iji nweta ihe nrite kachasị ee kacha onyinye nke izu a bụ gcn onyinyo ụlọ ka ị wee nweta ụfọdụ foto igwe kwụ otu ebe na-ebu ụzọ weta ntuli aka nke izu gara aga ee ka anyị lelee nsonaazụ anyị nwetara pellegrin mtvs lotuslookalike megide Burns peugeotrenovationyeah na uh, nsonaazụ ya dị ezigbo nso, ị nọ n'ezie mara mma ọbụna, gburugburu 47 pasent bụ pellegrins ugwu igwe kwụ otu ebe lotuslookalike ma merie uru maka pasent 52 na-agba ọkụ mmeghari ohuru, yabụ anyị nwetara nke ahụ ezitere anyị, yabụ lekwasị anya na Facebook ee nke ahụ ziri ezi n'izu a anyị nwere davzadz ahwinter kụrụ igwe kwụ otu ebe nke ahụ na-awụlị wuru gburugburu ngwakọ ngwakọ na ha nwetara nke a n'oge ikpeazụ oyi rad ọ dị oke mma ee mana hedabzad na-emegide roba ugbu a olulu ahụ sitere na louis lewisville na kentucky agabeghị m loisisville ị nweghị m ma mana m ga-achọ ehee otu ụbọchị uh ọkara ihe egwuregwu m nwere na ịnyịnya ígwè na-atụgharị na ịnyịnya ígwè m, yabụ gịnị mere ị ga-eji kwalite ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na biya biya friji-TV-cowhide-carpet- na ebe a na-adọba ụgbọala na-acha agba nke ọkụ imee ee obuna nwere ollie na agwayo eeh ziri ezi na anyi nwere ike igbanwe ma umby na o di ezigbo nma nke dikwa oke nma. ahuru m ya n'anya nke mere na odighi anyi aka, o bughi gi n'aka na ngwa gcn ka ikwusi ma nweta onye mmeri votu echefula na anyi meriri ihe nrite kacha elu ugbua o ruola ugbua maka igwe kwụ otu ebe kedu ka mmadu niile si etinye igwe kwụ otu ebe n’ime igwe kwụ ala alex Ọfọn, ị bulite ha na ngwa gcn na igwe kwụ otu ebe, ee, na anyị nwere ike votu ma ha bụ net t ma ọ bụ ibu mma na anyị nọ n'ụgbọ mmiri, yabụ ụdị Ryan ị kpọrọ karịa ihe m mere kemgbe ọrụ? onye ya na ya choro m acho igu ya na obu oge di anya gara aga ka anyi tinye ya n'ime igwe ngba ala nchebe nke mbu neilbauer otu na o nwere otu ihe bu na enwere okwu ngbaghari1983 nke bu site chere chere chere chere nke di ezigbo nma karie ikpe ya ikpe. a bit first well i am mara mma m na-aga n'ihu nke agha ị maara ụdịdị nke igwe kwụ otu ebe mma yeah ọma m were nke a na valves na-kwụ n'ahịrị, ọ na-omume ọma ọkọnọ, yeah valvụ nwere a crankset na 45 degrees, ee, ọ dị ezigbo ọcha, ọ dị ọcha, ee, ọ masịrị m ọcha mana ọ masịrị m igwe ọcha o nwere ezigbo azụ ịnyịnya ị nwetara ya ee ee m ga-adị mma nke ukwuu nke mere na ọ dị mma na enwere m obi ụtọ na elu ise na-esote ọzọ ị na-aga maka nke ọzọ anyị zigara na turbo creocomp carbon pụrụ iche 'site na e-bike mbụ anderslee jordanda nke anyị nwere ruo oge ụfọdụ ka m wee họpụta onye a mana ọ bụghị ezigbo ngosipụta dị mma m ga-asị m ekwenyere m na echeghị m maka ya ma nzụkọ anyị nwere ọnụ ụzọ ụgbọala ee crank areon setu p wee wee kwekọọ valves na-adịghị n'ahịrị foto bụghị ozugbo na foto oh Chineke m mee m nwute na ọ bụ naanị a mma jordan ọ ga-abụ a mara mma nke mere mma ọzọ uh martyo charism23202 yeah keep patching that one upyeah this is the ventum ns1 and i have ịsị na ọ dị ka ezigbo ọmarịcha igwe kwụ otu ebe adịghị m enwetara ya n'ezie na ọ kwenyesiri ike mana ọ dị ezigbo mma, ọ dị ka superbike doro anya mana ọnụọgụ abụọ anwuru e nwere ọtụtụ ọrụ na-abụghị na ezigbo gangno windono ws na anyị abụghị inbiggie smallsnot saddlebags anyị ka nwere ngwa ya na cranks nke ihe ọjọọ anyị nwere ọdụdụ na ọkụ na azụ maka foto anyị ga-eme mgbe emechara ee anyị ga-ewepụ ya ọzọ were ọ bụ ọmarịcha mma ọfụma m chere na mgbanaka ahụ mgbịrịgba na-esote anaghị eche na m nwere ike ịsị ee uh uh crisp titanium okporo ụzọ nke ahụ dị mma nke a bụ igwe kwụ otu ebe ugbu a ndị mmadụ ga-ekwu ugbu a na nzụlite a dị mma, mana echere m, ọ na-enyere aka inye ya ntakịrị ekpomeekpo anaghị adị 'ọ bụ, ọ nwere agraff Ọ dị ka ọ bụ ihe titanium na-eji carbon forks na saddlebags ọ dị ezigbo mma echere m na ọ na-ada ụda, ọ dị ọcha n'agbanyeghị na ọ dị ọcha, ọ ka nwere ọtụtụ karama na igwe kwụ otu ebe ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ na igwe kwụ otu ebe. nye ya m chere na ọ dị mma mana echere m na m ga - enweta ikike ọfụma, ọ dị mma oh nke ahụ bụ nke ikpeazụ nke bụ ntinye ikpeazụ anyị maka nke a anaghị aga ọsịsọ, nke ahụ gara ọsọ ọsọ m ga - asị na igwe kwụ otu ebe bụ ihe kachasị mma ihe gbasara ihe nkiri a, yabụ na-ezipụ ng na igwe gị naanị ihe ị ga-eme bụ ime monto na bulite gcn ngwa onye ọ bụla ọzọ nwere ike ịtụ vootu na ya ma anyị ahọrọ ndị ọkacha mmasị anyị nwetara na showyeah nke ziri ezi na ọ bụ maka gcn techshow it was unbelievable m hụrụ n'anya minit ọ bụla ya theuh nri a bit nke bụ m kasị mmasị, ya mere ekele, Katharina, n'ihi na iziga ha, ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ ihe Christmas onyinye na ụlọ ahịa gcn, n'ezie echefula gaa n'ụlọ ahịa gcn, ị nwere ike nweta ụfọdụ onyinye ekeresimesi maka ndị niile hụrụ gị n'anya ịgba ịnyịnya ígwè na otu co ol nchịkọta, nke ahụ zuru maka izu a, ị nọ ebe ahụ, oh ee, m nwere nrọ kachasị njọ m chụpụrụ hank wee bịa mee ngosipụta na ọ bụ eziokwu maka m nwere olileanya na ị nwere mmasị n'isiokwu a ma ọ bụrụ na ị nye ya nnukwu isi mkpịsị aka, eriela m nri m na ihe niile yeahbizarre m na-abanye ma bido ime ihe ị chọrọ
Kedu ndị isi asọmpi 3 kachasị maka Trek?
N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma nke ịbụkasị ukwuuU.Sigwe kwụ otu ebeemeputa,Mee njemnwere anọndị isi asọmpi: Giant Manufacturing, Pụrụ icheIgweNgwa, ElectraIgweCompanylọ ọrụ, na SchwinnIgweLọ ọrụ.Eprel 6 2009
(Bell yiri mgbaaka) - Hey ụmụ okorobịa, enwere m olileanya na ị nwere ọmarịcha ụbọchị. Bosch na-ewepụta ụfọdụ mmelite maka injin 2020 ya. Ọ bụghị ha niile.
Ọ bụ naanị arụmọrụ arụmọrụ CX, arụmọrụ ọsọ ọsọ, larịị ibu na ibu akara ọsọ, nkeji anọ ndị a. Ha bụ ndị arụmọrụ dị elu na nnukwu torque. Na nkenke, ị na-esi na 75 Newton mita nke torque ruo 85 Newton mita nke torque wee mee nke a emelitere ọnọdụ eMTB ka eMBT bụ ọnọdụ a dị ike nke ị ga - enweta nkwado 140 ka 340%, yabụ na ọ bụghị naanị 50%, 100%, 340 %, mana nkwado dịgasị iche iche ma dị mma maka ịnyagharị ugwu ma ọ bụ wheelie ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ihi na ọ dị ike.
Ka ị na-agbasi ike, otú ahụ ka ọ na-emeghachi omume. Sistemụ Bosch maka e-igwe kwụ otu ebe na-atụ mgbatị pedal, cadence, na ụkwụ na-agba ọsọ karịa 1,000 ugboro kwa nkeji, yabụ na ha dị ike, ọ na-atọkwa ụtọ ịhụ etu nke ahụ si arụ ọrụ. Kwesighi ịkwalite ọnọdụ eMTB, mana echiche a bụ na ọtụtụ oge mgbe ị na-arịgo igwe kwụ otu ebe ma ndị anyị na-agbakwụnye bụ ọkara ntụgharị n'azụ ha, nke ọma, ị naghị agbanye ala ọzọ.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-achọ ntakịrị ọsọ iji gabiga ọrịa strok ahụ ma na-arịgo, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ nwayọ nwayọ nwayọ, yabụ agbatị agbatị bụ akụkụ nke mmelite a. Anyị na-na-ọzọ moto torque na a elu agbam ume mode-enyere gị aka na ndị a tech ngalaba. Adị m ka, huh, na-eche etu ihe a ga - esi bụrụ n’ihi na ikekwe m ụma chọrọ ka ọ daa ma kwụrụ ọtọ, ma ọ bụrụ na injin ahụ anaghị akwụsị nke ọma mgbe m chọrọ ya, ị ga - enye dọkịta na - awa ahụ ntakịrị ihe ngwa.
Nke ahụ bụ mmetụta m na-enwe dị ka onye na-agba ígwè n’elu ugwu. Maka ọtụtụ mmadụ, echere m na ọ ga-enyere ha aka ịrị mfe ma nwekwu obi ike na igwe kwụ otu ebe. Imirikiti e-igwe kwụ otu ebe, na efere igwe na Bosch karịsịa, na-ebuwanye ibu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha kwụnye batrị Power Tube, yabụ tupu m kesaa ihe ngosi a na Bosch mere ụbọchị nke ọzọ, ị nwere ike ịnụ ozugbo na ndị nnọchi anya ha, m chọrọ ikwu banyere Bosch dị ka ụlọ ọrụ.
Ọ dịla kemgbe 2009, mgbe Bosch E-Bike Systems batara n'ahịa n'ime ụlọ nne na nna Bosch. A ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche maqbx chekwebe afọ ndị a, ma ugbu a, ha na-aga nwere asaa engines na ngụkọta, ya mere, anyị nwere nọ n'ọrụ Line na-arụsi ọrụ ike Line Plus. Igwe ndị a bụ maka ị gbagharị agbata obi.
Adịghị m nnukwu onye na-arụ ọrụ mgbe niile ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ n'ihi na ọ naghị - ọ naghị enye ọtụtụ torque. Ọ bụ 40 Newton mita tụnyere 75 na ugbu a 85 Newton mita maka ndị a elu-ọgwụgwụ Motors, na ha na-akwado a cadence nke 105 RPM, gbagwojuru kwa nkeji, ma ọ bụ 110 maka Ọrụ Line Plus moto, ya bụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịga ugwu ma na-agbadata n'ihi na ịchọrọ ị nweta uru na ntanetị ngwa ngwa, moto ahụ enweghị ike inyere gị aka ịtụgharị ngwa ngwa. abụghị nnukwu ihe maka ọtụtụ ndị agbata obi agbago mana nke ahụ bụ otu n'ime nkwekọrịta ma moto nke atọ bụ akara ike ha nke na-ewute m nke ukwuu na ha kpọrọ ya n'ihi na ọ dị ka Motors abụọ ahụ na-arụ ọrụ, ikpe na ndị dị otú ahụ, m wee jụọ Bosch, 'Echere m, bịa, ọ ga-abụrịrị otu ngwaike ahụ, ọ kwa?' Naanị m gbanwere arụmọrụ ahụ ma ha kwuru na enweghị ọdịiche dị.
Ọ dị ike karịa, ọ dị oke mma, nke ahụ bụ 120 RPM, mana ọ dị ka igwe na-arụ ọrụ nke ọma. Na mgbe ahụ anyị ga-erute ihe m chere na ọ bụ akara ngosi arụmọrụ dị elu, na ndị a bụ maka Performance Line CX, Speed ​​Speed ​​Line, Cargo Line, Cargo Line Speed. Ndị ahụ bụ mmadụ anọ ga-enweta mmelite ngwanrọ a.
Ọ bụ n'efu. Ga-agakwuru onye na-ere gị ma nwee ike kwụọ ụgwọ ahụ n'ihi na ha ga-etinye 20, 30 nkeji na-ejikọ igwe kwụ otu ebe gị ma na-emelite ya, mana ọ dị ka ọ bara uru ma ọ dị mma na ị nwetara nke ahụ n'efu. Ọ bụ a mma update ịnọ otu nzọụkwụ n'ihu, na na mmezi torque ọ na-eme ka ha na-asọmpi Brose Motors ma ọ bụ Shimano, Yamaha, ndị ahụ bụ nnukwu ha rivals m na uche.
Enwere Bafang kwa, mana echere m na ndị Europe, sistemụ ọkaibe karịa nke nwere ọtụtụ sensọ na ihe ndị ọzọ, ndị a bụ ezigbo ndị na-asọ mpi ha, ọkachasị maka ndị na-ebido ebugharị igwe eji ebu ibu, ọkachasị site na obere ọkwa, ee, ị nwere ike ịbanye na ala otu Mgbanwe mgbanwe na nke ahụ ga-enyere aka, mana ihe ị chọrọ bụ na enyemaka enyemaka ọzọ iji malite ịmalite, ma ọ bụ na-agagharị nwayọ nwayọ, ịrị ugwu, nke ahụ bụ ihe ị ga-enweta mgbe ị gbadara site na 75 Newton mita gaa 85 mita Newton, yabụ ka anyị ga. Nke a bụ ngosi - Ka anyị bido na Line Performance Speed. Ezubere ya maka ojiji na S-Pedal X ma na-enye nkwado ruo ikike 45 kilomita.
Maka ihe nlere anya afọ 21, anyi na-enye onoduwanye ihe karie ihe ngwanrọ. Nke a pụtara na mbanye unit nwere ike mee ngwangwa ọkwọ ụgbọala na a tog nke 85 Newton mita ma si otú ana achi achi a ọzọ dị ike na ike ịnya ụgbọ ahụmahụ, kwesiri ngosi mgbe ụgbọala na ala cadence. Nnukwu ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na enweghị mmeri nke ogologo ụzọ.
E nyekwara anyị sistemu anyị maka e-ebu anyịnya igwe, Cargo Line, ka ọ rụpụta ọrụ. A na-enweta draịva na ụdị abụọ, yana nkwado ruo kilomita 25 kwa elekere, ma ọ bụ maka ọsọ Line Cargo, ruo kilomita 45 kwa elekere. Nwelite ngwanrọ anyị abụghị naanị na-erite uru ndị na-agba ịnyịnya ígwè, nwere ikike dị ike ruo 85 Newton mita, ha na-enwetakwa nkwado siri ike karị.
Mkpụrụ ahụ na-enye ọbụna nkwado ọzọ na obere ọkwa. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ịmalite ma mee ngwangwa mgbe ị na - ebufe ibu dị arọ. Enwere ike itinye ngwanrọ ngwanrọ maka Cargo Line site na ndị na-ere ịnyịnya ígwè site na oge ọkọchị 2020, mana Cargo Line Speed ​​na Performance Line Speed ​​enweghị ike iweghachi gị nye gị Ọhụrụ Line Line, igwe eletriki igwe eletriki anyị nke e-ugwu na-agagharị nlereanya afọ 20.
Mpaghara draịva a bụ kọmpat na kọmpat, ma dịkwa ike ma dịkwa ọfụma. Ọ na-enye kachasị nkwụsi ike na arụmọrụ dị elu. Ọ bụ ya mere anyị ji setịpụ akara ngosi ọhụrụ na eMTB, natakwara ọtụtụ nzaghachi dị mma ma merie ọtụtụ onyinye.
A nabatara nke ahụ. Nke ahụ na-emekwa ka anyị nweta ihe ndị ọzọ. Anyị na-azụlite anyị. na-agbanwe agbanwe nkeji oge ma na-achọ ịkwalite ahụmịhe eMTB.
Ya mere, anyị na-eweta ngwanrọ ngwanrọ zuru ezu maka Performance Line CX maka afọ ihe atụ 21. Mmelite ahụ na-enye ndị na-agba igwe e-ugwu ọbụna ihe ndị ọzọ na-agba ọsọ, ịdị gara gara na njikwa kensinammuo na ụzọ ụkwụ. Iji mezuo nke a, anyị buru ụzọ mee ka ọnụọgụ ahụ ruo mita 85 Newton.
Nke a na - eme ka osooso dị ike ma dịkwa ike karị, ọ kachasị nke ọma. Offmalite na nchegharị dị larịị ka ọ dị mfe. Mmụba nke mmepụta na-enye ike zuru oke n'ọtụtụ ebe.
Nke a pụtara na ọnọdụ na-atụghị anya ịkwọ ịnyịnya nwere ike mụta karịa ka mma. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-agbanwe oge oge ma ọ bụ mgbe ị na-agbatị ọsọ ọsọ. Idinggba ịnyịnya na-anọ jụụ ọbụna na Turb.
Anyị kpọgara Modus n'ọkwa ọzọ. Na ọnọdụ ịkwọ ụgbọ ala na-aga n'ihu, enyemaka moto na-adaba na ụdị ịkwọ ụgbọala ọ bụla dabere na nrụgide pedal. Akụrụngwa ngwanrọ ahụ na-emezigharị ọnọdụ a.
Ihe mmetụta ọhụụ na njikwa njikwa ugbu a na-akwado nkwado dị ike karị na nke sitere n'okike na ogologo oge. Nke a na - eme ka ahụmịhe ịkwọ ụgbọ elu dị egwu na nke siri ike, njikwa njikwa na ụzọ, meziwanye nke ọma, njikwa traction ka mma yana ịmalite omume dịkwa mma ma nwekwuo mmetụta, ọkachasị dị ala. Dị ka akụkụ ọhụrụ nke ọnọdụ eMTB, mmụba gbatịkwuru na-eme ka arụmọrụ dị mma ma na-achọ ụzọ ndị dị n'ụzọ.
Nke a na-enyere ndị na-agba igwe e-ugwu aka imeri mgbọrọgwụ ekpughere, usoro na okwute ọbụlagodi. Usoro ahụ na-eme site na itinye nrụgide ziri ezi na pedal n'ọnọdụ ọ bụla. Na iberibe irighiri nkeji nke abụọ enwere mkpali dị ike iji merie ihe mgbochi.
EMTB nwere ike iji obi ike na ike rụọ ọrụ site na nyocha nke teknụzụ maka mgbakwunye agbatị. Nke a na - eme ka mmụba ahụ dịkwuo elu ma belata nchekwube maka pedal jam. Nwelite ngwanrọ a na - achota oke ihe egwuregwu.
Enwere ike iweghachite igwe eletrik niile na arụmọrụ Performance Line CX, wepụtara site na ụdị afọ 20 ma dị site na ndị na-ere ịnyịnya ígwè n'oge ọkọchị. - Ya mere ụmụ okorobịa. Bosch na-eme ụfọdụ igwe e-bike kachasị amasị m.
Ha na-adịkarị ntakịrị ọnụ ma oge ụfọdụ m na-eche ihe kpatara ha ji enwe ọtụtụ nkeji ụgbọala? Anyị achọrọ Line Line? M hụrụ ya n'anya na-eme ihe n'eziokwu, ma ọ na-eme igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala karịa na ọ bụ eleghị anya ndị ọzọ nke a batrị mkpọ karịa ụfọdụ nke ndị elu ọgwụgwụ Motors, nri, na ndị ọzọ ike ya mere na ọ dabere na ụdị nke na-agba ịnyịnya na ị chọrọ ime. Ọ dị m ka Bosch na-arụ nnukwu ọrụ na-akwado ndị ahịa ya. Have nwere na afọ abụọ zuru akwụkwọ ikike na ndị niile na-ere ahịa na stof ebe ị nwere ike ịga na n'ezie melite ma ọ bụ a software update dị ka onye anyị na-ahụ ebe a.
Ọ ga-amasị m ikwusi ike na Bosch abụghị ụlọ ọrụ ngwaahịa. Ha bụ 93% nke ndị na-enweghị uru, Bosch Foundation, ma ndị ọzọ bụ ezinụlọ Bosch, yabụ ha nwere ike ịme nzọ ogologo oge ma tinye ego n'ime ihe ndị ziri ezi, nke m chere na e-igwe kwụ otu ebe bụ n'ezie Ntọala, ha na-elekwasị anya n'ihe ndị ruuru mmadụ, nkwado gburugburu ebe obibi ma ha na-agba mbọ ka ha ghara ịbubata akụkụ égbè nke dị mma na-atụle na ha nwere akụkụ ụgbọ ala ndị a niile. Nke ahụ nwere ike ọ bụghị obere uru dollar, na m chere na ọ dị mma.
Ọ bụ ihe m mụtara mgbe m na-amụ nkọwa niile nke mmelite engine na ịmara ụlọ ọrụ ntakịrị ntakịrị olileanya na nke a na-enyere gị aka na nke a abụghị isiokwu a na-akwalite ma ọ bụ ihe ọ bụla, Achọrọ m ịkekọrịta ihe m na-amụ ma nwee ezigbo mkparịta ụka ma nyere gị aka ịchọta igwe kwụ otu ebe, ụdị ndụ gị na mmefu ego gị, yabụ nwee olile anya na ị nwere nke dị mma. Aga m ahụ gị oge ọzọ. (Nnụnụ na-ebe ákwá)
Ogologo oge ole ka ichere maka igwe kwụ otu ebe?
Mee njemawade free ọkọlọtọ ala nnyefe gị obodo họọrọMee njemonye na-ere ahia. Iwu gị ga-adị maka iburu n'ime ụbọchị azụmahịa 3-5. Nye oge makaigwe kwụ otu ebeiwu. Enweghị ụgwọ mgbakọ ọzọ makaanyịnya igwe.
Gịnị mere ịnyịnya ji esi ike ịchọta ugbu a?
The ala ọkọnọ na nnukwu ina makaanyịnya igwena-akpata ụkọ. Ihe ndị ahịa chọrọ, ihe ndị ka mkpa, na ụkpụrụ ha na-agbanwe ụlọ ọrụ. Ihe kpatara ya bu nchikota nke igbu oge na ntinye na mmasi gburugburu biking na ihe ndi ozo di n’èzí n’ihi oria ojoo a.Eprel 20 2021
Kedu ihe kpatara ụkọ igwe kwụ otu ebe ka dị?
Nke ugbu aụkọ igwe kwụ otu ebebụ ihe sitere na njupụta ọchịchọ na-adaba na 'nro ntụtụ,' ka o kwuru. “Ihe ndị na-esi na ya apụta na mmebi iwu dịgidere ruo taa.” Ọ bụ isiokwu na-agba ọsọ n'oge ọkọchị a.June 4. 2021 g.
Gịnị mere ọnụ igwe kwụ otu ebe dị elu karịa?
Otu n'ime ihe ndị kachasị akpata ego nkeigwebụ ihe. Carbon eriri na-abịa n’ụdị dị iche iche na akara ule. Nanke ka eluàgwà nke carbon, nke ka ukwuu na ọnụ ahịa nke ndị na-emepụta ya. Ọ bụrụ naigwe kwụ otu ebeemeputa na-echepụta ya carbon, a na-eri ga-recouped na ire ere nke aigwe kwụ otu ebe.
Ọnụ igwe kwụ otu ebe ga-ebelata na 2021?
Site na mkpọchi n'ọtụtụ steeti na ụlọ ọrụ nrụpụta gafere usoro iheomumu abụọ nwere ụkwụ - gụnyere ọkacha mmasị nke onye na-arụ wheele abụọ kachasị ukwuu n'ụwa, Hero MotoCorp na HondaỌgba tum tum& Scooter India - ndịna-agaO yiri ka ọ na-arị elu ma ụlọ ọrụ ahụ na-akwadebe maka ịsacha May2021mgbe ike06.05.2021
Ọ bụ nnukwu mmadụ nwere Trek?
Nnukwubụ onye na-eme igwe igwe kachasị ukwuu na ụwa site na ntinye ego. companylọ ọrụ ahụ na-ere anyịnya igwe n'okpuru aha ya ma mee ha maka isi ụdị dị kaMee njem, Scott na Colnago.Ọgọst 30 2013
Ebee ka m nwere ike ịhụ Trek Bikes maka ọrịre?
Jiri kọmpụta gị ma ọ bụ ekwentị gị iji nyochaa akụrụngwa anyị oge ọ bụla kacha adịrị gị mma. Fọdụ n'ime ndị na-ere ahịa Trek a kacha akwanyere ùgwù site na Arizona ruo Massachusetts depụtara igwe kwụ otu ebe ha maka ire ere na BikeExchange. Nke a na - enye gị ohere ịnya ụdị igwe dịgasị iche iche, na - abụkarị ego efu.
Kedu ka m ga-esi akwụ ụgwọ igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụrụ na ị na-azụ igwe kwụ otu ebe gị site na otu n’ime ndị na-ere ahịa e-commerce anyị, ị nwere ike mezue azụmahịa ahụ dum na ntanetị wee kwụọ ụgwọ zuru oke site na kaadị kredit ma ọ bụ PayPal. Ohere ozo bu ikwu ugwo na intaneti ma bulie igwe kwụ otu ebe na ụlọ ahịa.
Kedu ihe na-eme igwe kwụ otu ebe dị mma igwe kwụ otu ebe?
Njirimara ndị a na-agbagharị na Smart na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe ma na-ele anya mgbe ị kwụsịrị. 2. Ugbo mmiri & amp; Uwe a na-eyi oge anwụ Ekike ejirigogo oge iji mee ka oge gị nọrọ na igwe kwụ otu ebe na-atọ ụtọ. 3. ABC nke mmata Nke a bu etu o si di mfe ntuziaka. ABC Mmata -Na-aga n'ihu, Biomotion na iche. 4.